Muuqaal Naxdin leh: Ganacsade Caan ah oo maanta isku dal dalay Hargeysa |
Muuqaal Naxdin leh: Ganacsade Caan ah oo maanta isku dal dalay Hargeysa
Waxaa Maanta Dooxada Magaalada Hargeysa ee xarunta Maamulka Somaliland laga helay Meydka ganacsade caan ka ahaa Magaaladaasi oo loo badinayo in uu is dal dalay.
Dad badan ayaa isugu soo baxay Dooxada Hargeysa geed kuyaala oo maanta lagu arkay Meydka Ganacsade Bakhaar lagu iibiyo Qalabka dhismaha ku lahaa Magaalada Hargeysa, Meydka Ganacsadaha ayaan markii loo tagay ka laad laaday geed weyn oo halkaasi kuyaala.
Muuqaal laga soo qaaday ayaa muujinayay Meydka ganacsadaha oo ka laad laada geed kuyaala Dooxada Hargeysa, waxaana goobtaasi soo gaaray oo usoo daawsaho tagay dadweyne badan oo ka kala yimid xaafadaha halkaasi ku dhaw.
Ciidamada booliiska ayaa markii dambe Meydka halkaasi ka qaaday, waxa ayna booliisku bilaabeen in baaritaano ku sameeyaan in Ganacsadahan uu isagu is dal dalay ama cid kale ay ka dambeysay daldaaadiisa.
Dhacadanmaanta ka dhacday Magaalada Hargeysa ayana noqotay mid dad badan aragagax ku riday, waxa uuna ahaa ganacsadaha meydkiisa la helay oo loo maleenayo in uu is dal dalay nin si weyn looga yaqaanay Magaalada Hargeysa .